प्रधानमन्त्रीलाई प्रदीप गिरीको प्रश्न–थपना मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म रहन्छन् ? संसदीय बहुमतको भर हुन्न, इन्दिरा र राजीव गान्धीबाट पाठ सिक्नुस - Marganugami Daily
Marganugami Daily Headline2 Photo News Politics प्रधानमन्त्रीलाई प्रदीप गिरीको प्रश्न–थपना मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म रहन्छन् ? संसदीय बहुमतको भर हुन्न, इन्दिरा र राजीव गान्धीबाट पाठ सिक्नुस
प्रधानमन्त्रीलाई प्रदीप गिरीको प्रश्न–थपना मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म रहन्छन् ? संसदीय बहुमतको भर हुन्न, इन्दिरा र राजीव गान्धीबाट पाठ सिक्नुस
Marganugamidaily प्रकाशित समय 12:45:00 AM
काठमाडौं, १२ चैत्र । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले अधिकारविहीन मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म राख्ने भनी प्रधान मन्त्री समक्ष प्रश्न गरेका छन् ।
संसदको सोमबारको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै गिरीले प्रश्न गरे, ‘थपनामात्रका मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म रहन्छन् ?
गिरीले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूसमक्ष निरीहता व्यक्त गरेको प्रशंग कोट्याउँदै मुख्यमन्त्रीहरुलाई थपना भनेका हुन् । गत चैत ९ गते लाहनामा विकास सारडाको सुन पसलमा बम विष्फोट भएको घटनापछि आफूले मुख्यमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेको उनले बताए ।
गिरीले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या परेकाले कतै उपाय नलागेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई फोन गरेँ । उनलाई लहान घटनामा पुलिस परिचालन गर्नुस् भन्दा दाजु १ मेरो हातमा पुलिस पनि छैन, प्रशासन पनि छैन भनेर निरीहता प्रकट गरे । मुख्यमन्त्रीको यो अवस्था छ भने संविधान कसरी कार्यन्वयन हुन्छ ? थपना मुख्यमन्त्रीहरु कहिलेसम्म रहन्छन् ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रचण्ड बहुमत रहेको र प्रतिपक्ष कमजोर बनेको तर,संसदको बहुमतको भर नहुने उनले बताए । भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र राजिव गान्धीको उदाहरण दिँदै कांग्रस सांसद गिरीले विपक्षीलाई उचित सम्मान गर्न आग्रह गरे ।
‘आज केपी ओलीले पाएको भन्दा ठूलो बहुमत राजिव गान्धीसँग थियो तर, उनको सरकार ३ वर्षमै ढल्यो । इन्दिरा गान्धीले संविधान निलम्बन गर्दा उनको सत्ता ढल्यो गिरीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी संसदीय बहुमतको कुनै भर हुँदैन । चाँडो स्थानीय शक्तिलाई अधिकार दिनुस, नत्र तपाईले नचिताएको आन्दोलन हुनेछ ।
#Headline2 #Photo News #Politics
सप्तरी, १९ कार्तिक । जंगली हात्तीको आक्रमणबाट सप्तरीमा एक जनाको ज्यान गएको छ । सप्तरीको उत्तरी पूर्वी गाविस बैरबा–८ का ६२ वर्षे अलाउद्दिन ख...
पेट्रोलियम पदार्थ कालोबजारी गर्ने ७ पक्राउ,
काठमाडौँ १७, मंसिर ।महानगरीय अपराध महाशाखाले पेट्रोलियम पदार्थ कालोबजारी गर्ने सात जनालाई काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट मङ्गलबार पक्राउ गरी आ...